सुनको मूल्य लगातार ओरालोतर्फ, आज प्रतितोला कति घट्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सुनको मूल्य लगातार ओरालोतर्फ, आज प्रतितोला कति घट्यो ?
मंसिर १४ गते, २०७७ - १२:१५
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ६०० ले ओरालो लागकोे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज प्रतितोला रु ९० हजार ७०० मा कारोवार भएको छ । शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९१ हजार ३०० मा कारोवार भएको थियो ।
यस्तै तेजाबी सुन आज प्रतितोला रु ९० हजार २०० मा कारोवार भएको छ । शुक्रबार तेजाबी सुन प्रतितोला रु ९० हजार ८०० मा कारोवार भएको थियो । यस्तै चाँदी आज प्रतितोला रु एक हजार १५० मा कारोवार भएको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला रु एक हजार १६५ मा कारोवार भएको थियो । शुक्रबारका तुलनामा आज चाँदी प्रतितोला रु १५ ले घटेको हो ।
मंसिर १४ गते, २०७७ - १२:१५ मा प्रकाशित